Xiddiga Arsenal Ee Maitland-Niles Oo Galay Shil Baabuur Oo Halis Ah - Maxaa Khasaare Ah Ee Soo Gaadhay? - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaXiddiga Arsenal Ee Maitland-Niles Oo Galay Shil Baabuur Oo Halis Ah – Maxaa Khasaare Ah Ee Soo Gaadhay?
Xiddiga Arsenal Ee Maitland-Niles Oo Galay Shil Baabuur Oo Halis Ah – Maxaa Khasaare Ah Ee Soo Gaadhay?
July 1, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Xiddiga Arsenal ee Ainsley Maitland-Niles ayaa galay shil baabuur xilli uu dariiqa socday, waxaana dhinaca kale isku rogay gaadhigiisa qaaliga ah ee noociisu yahay M25.
Muuqaallo laga soo duubay shilka ayaa waxay muujiyeen, in Ainsley Maitland-Niles uu nasiib badan lahaa kaddib markii uu ka badbaaday shilka baabuur oo halis ahaa.
Wararka hordhaca ah ayaa waxay sheegayaan, in baabuurka Ainsley Maitland-Niles oo noociisu yahay Mercedes-Wagon oo qiimihiisu yahay £105,000 Gini ay isku dhaceen baabuur kale xilli ay marayeen waddo cidhiidhi ah oo xawaare dheer lagu socday, isla markaana uu is-rogay baabuurkiisa, halka uu kan kalena soo gaadhay burbur badan.
Afhayeen u hadlay kooxdiisa Arsenal ayaa yidhi: “Waxa aanu ka war haynaa shil baabuur oo uu qayb ka yahay £105,000. Ainsley wax dhaawac ah ma qabo, waxaanu joogaa gurigiisa.”
Markii uu baabuurku shilka galay ee uu ku dhacay waddada, waxa nasiib wanaag ahayd in aanay jirin baabuur kale oo waqtigaas socotay dariiqa oo sii jiidha, sidaas ayaanu kaga soo badbaaday iyadoo rog-mashadii iyo jugtii horena aanay waxba kasoo gaadhin.
Laacibkan ayaa sawirro laga soo qaaday isagoo fadhiya waddada agteeda oo ku hadlaya telefoon.
Qof la hadlay wargeyska The Sun oo aan la magacaabin, soona arkay baabuurka iyo sida ay wax u dhaceen ayaa yidhi: “Wuxuu ahaa shil naxdin leh oo u muuqday burbur badan ka dhashay.
“Annagu waxa aanu dhaafaynay baabuurka, waxaananu layaabnay Maitland-Niles oo waddada dhinaceeda jooga. Wuxuu u muuqday inuu caadi yahay, wuu fadhiyay telefoon ayaanu ku hadlayay laakiin baabuurka ayaa burbursanaa.
“Waxay ila tahay inuu nasiib ku badbaaday, waana hubaal taasi. Waxa aan qiyaasi karayaa inuu ka fikirayey saamaynta ay ku yeelan karto mustgaqbalkiisa.”
Ciidamada booliska ayaa iyaguna goobta tegay shilka kaddib, waxaana la xaqiijiyey in gaadhiga ay iskau dhaceen Maitland-Niles uu watay qof da’ ah, waxaana sidoo kale goobta lagu arkayay dab-damiyeyaal.
Booliska ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in subaxnimadii hore ee Arbacada, xilli ku beegnayd 6.10am loosoo diray telefoon oo lagu wargeliyey in is-goyska 25 ay isku dhaceen laba baabuur, laakiin ciidamada booliska iyo gaadiidka gurmadka degdegga ah aanay arag wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay.